Pop Pin New August 19, 2019
နှစ်စဉ်ကျောင်းမှာ ပထမဆုခဏခဏချိတ်လို့ မိဘဆရာတွေက အချစ်ပိုခဲ့ရတဲ့ သမီးလေး နှင်းရတီထွန်း … လက်ရှိ Novel ပုဂ္ဂလိကကျောင်းမှာ ၇တန်းတက်နေပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့အထိ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ကျောင်းတက်ဆော့ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ သမီးလေး … ၁၈.၈.၂၀၁၉ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက် ၆ နာရီစပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ သူ့ဘဝလေးထဲ ဂြိုလ်ဆိုးစဝင်ခဲ့တယ်လို့ဘဲ ဆို ပါ ရစေ …
နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ ရဲ့ အသဲစွဲ သရုပ်ဆောင် ဒေါင်း ဟာဆိုရင် ယောကျာ်းပီသလွန်းလှတဲ့ မျက်နှာ ညို့အားပြင်းလှတဲ့ သူ့ရဲ့ မျက်လုံးလေးတွေကြောင့် နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးခြင်းကို ခံထားရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိုမိုလေး ရဲ့ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် သရုပ်ဆောင် ဒေါင်းရဲ့ ကြော်ငြာvideo လေးတစ်ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဒေါင်းက ရုပ်ရည်ချောမောသူတစ်ဦးဆိုပြီး နာမည်ကြီးသလို သရုပ်ဆောင်ပီပြင်လွန်းတာကြောင့်လည်း နာမည်ကြီးမင်းသားတစ်ဦးအဖြစ်စာရင်းဝင်လာသူပါ။ …
မနေ့ည အဖေဖြစ်သူ လုံအေးက လက်နက်ကြီး ထိမှန် သေသွားလို့ ငိုကြွေးနေတဲ့ စိုင်းစံပွင့်လေး….. မငိုပါနဲ့တော့ ကလေးရယ်… တပည့်တော်လည်း ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်း ငိုမိတော့မယ်။ သနားလိုက်တာ …ရင်ထဲနင့်နေအောင်ပါပဲ… အားလုံးဘေးရန်ခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းနိုင်ကြပါစေ…. စစ်ပွဲကြီးလဲ မြန်မြန်ပြီးဆုံးပီး တိုင်းပြည်ကြီးလဲ အေးချမ်းသာယာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ….ဒီကလေးလေးလို အဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့ကလေးပေါင်း ဘယ်လောက်တောင်ရှိနေပြီလဲ ….။ တရားသောစစ် အောင်မြင်ပြီး မြန်မြန်ပြီးဆုံးပါစေ…… ။poppinnew.com …
၁၉ – ၈ – ၂၀၁၉ မဟာမိတ်ညီနောင်တပ်ဟု ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနေ သောအဖွဲ့များ လားရှိုးမြို့ကိုမသိမ်းနိုင်ပဲဆုတ်ခွာထွက်ပြေးကြရပြီး အထိနာနေကြဟုဆို ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ အရှေ့မြောက်ဒေသ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် AA၊/MNDDA/TNLA ပူးပေါင်းသောမဟာမိတ်အဖွဲ့သည် နောင်ချိုဘက်မှ တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးသည်နှင့် လားရှိုး၊ကွတ်ခိုင်၊မူဆယ်မြို့များသို့ မြို့သိမ်းပိုက်တိုက်ပွဲဆင်နွဲကြတော့မည့်ဟူ၍ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ၌ ဖွကြသဖြင့် မြိုံခံပြည်သူများစိတ်မချမ်းသာဖြစ်ကြရသည်။ ထိုကဲ့သို့ဖွကြသည့်အတိုင်း တိုက်ဆိုင်ချင်တော့သြဂုတ်လ၁၇ ရက်နေ့တွင်လားရှိုးမြို့၏ အရှေ့ဘက် ၄ မိုင်ခန့်အကွာ မိုင်းတင်၊မိုင်းယန်း …
တပ်မတော်ကို ပြည်သူတွေ မချစ်ဖူးလို့ ဘယ်သူပြောလဲ….. တပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူ …… နယ်မြေလုံခြုံရေး ယူပေးနေတဲ့ တပ်မတော်သားတွေအတွက်ပြည်သူတွေက ထမင်းဟင်းချက်ပြီး ပို့ပေးနေတာ …… သာဓုပါ သာဓုပါ သာဓုပါ.. ဖြစ်သင့်ပါတယ်. သူတို့က အသက်နဲ့ရင်းပြီ ကာကွယ်တာ.. အချို့က ပါးစပ်နဲ့ ရင်ပြီး.. လေနဲ့ ကာကွယ်နေတာ.. တဖက်မှိတ်တွေကြည့်န်ုင် မြင်နိုင်ပါစေ..👍👍👍 တပ်မတော်သားများ အါးလု …
နေပြည်တော်တွင် အသက် ၇ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တဦး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထပ်မံပြုကျင့်ခံရ နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေ၊ ပျဉ်းမနားမြို့ တဲကုန်းရွာတွင် အသက် ၇ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ် တဦးကို ဆွေမျိုးတော်စပ်သည့် အမျိုးသားတဦးက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ကာ အဓမ္မပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ပျဉ်းမနား မြို့မ ရဲစခန်းမှ သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ သြဂုတ် ၁၆ …
ဂုတ်တွင်းတံတား မနက်ဖြန်(20-8-2019) နေ့လည်ပိုင်းလောက်ဖွင့်ပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေ Monday, August 19, 2019 ဂုတ်တွင်းတံတားအား ဝန်ထမ်းအင်အား ၂၀၀ ကျော်ဖြင့် နေ့ညမအား အမြန်တည်ဆောက်လျက်ရှိပြီး ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းသတင်းမီဒီယာသမားတွေကသွားပြီး သတင်းယူတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယနေ့ ညပိုင်းမှာတံတားတည်ဆောက်ရေးပြီးမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါသည်။တံတားတည်ဆောက်ပြီးချိန်တွင် ချဉ်းကပ်လမ်းဆောင်ရွက်၍ ၎င်းနောက်ကားတန်ချိန်စမ်းသပ်ပြီး လွတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ကားတန်ချိန်မှာ ၃၆ တန်လို့ ခန့်မှန်းထားသည်။ …
မိုးတွေရွာမည် မြန်မာပြည်…. ☔☔☔☔☔
မိုးတွေရွာမည် မြန်မာပြည်…. ☔☔☔☔☔ ၂၀၁၉ ဩဂုတ်လ ၂၀ရက်နေ့မှ ၃၁ရက်နေ့အတွင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်း LPA (or) WML (or) Monsoon Low ၂ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကာ မုတ်သုန်လေအားကောင်းနိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအောက်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံး မိုးများရွာသွန်းနိုင်သလို ဗီယက်နမ်ဖက်မှ Cyclonic Circulation UAC tropical များက မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အထက်ပိုင်းသို့ မိုးများရရှိလာစေနိုင်ပါတယ်… 19/08/2019 …
မတော်တဆ ဖြစ်ခဲ့ရင် မပေါ့ဆကြဖို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
သာယာတဲ့ ညနေခင်း တစ်ခုမှာ အရေးပေါ် ဆရာဝန် ခေါင်းကိုက်စရာ တစ်ခုနဲ့ ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ် နယ်မြို့လေးကနေ လာပြတဲ့ လူနာတစ်ယောက် ။ အသက် ၃၅ ခန့် သန်မာတဲ့ လူရွယ်တစ်ယောက် တစ်သက်လုံး ဘာရောဂါမှ မဖြစ်ဖူးသူ မှာ နေ့လည် ၁၁ နာရီ ခန့်က သွေးတစ်ကြိမ် အန်သည်။ ဆေးရုံသို့ ခေါ်လာရာ …
ဓမ္မတာမလာလို့ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆရာမထံ ပြသကြည့်ရာမှ(၁၃)နှစ်အရွယ် (၈)တန်းကျောင်းသူလေးရဲ့အဖြစ်
ဓမ္မတာမလာလို့ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆရာမထံ ပြသကြည့်ရာမှ(၁၃)နှစ်အရွယ် (၈)တန်းကျောင်းသူလေးရဲ့အဖြစ် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊ လင်းကင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖွဲ့စင်းမြောက်ဘုရားငါးဆူကျေးရွာမှာ အသက် ၁၃ နှစ် အရွယ် အရွယ် ၈ တန်း ကျောင်းသူတစ်ဦးမှာ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရမှုကြောင့် ကိုယ်ဝန်၅လလွယ်ထားရပြီး အဓမ္မ ပြုကျင့်ခဲ့သူကို သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်က ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ ညောင်ရွှေ မြို့မရဲစခန်းမှ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ အဓမ္မ …